January 7, 2022 - Channel Lover
ပညာရှင်များ ယခုထိ အဖြေရှာမတွေ့သေးတဲ့ မွန်ပြည်နယ်ထဲက ထူးဆန်းတဲ့ တွင်း (၁၀၀)
January 7, 2022 by Channel Lover
ပညာရှင်များ ယခုထိ အဖြေရှာမတွေ့သေးတဲ့ မွန်ပြည်နယ်ထဲက ထူးဆန်းတဲ့ တွင်း (၁၀၀) ကျွန်ုပ်တို့ နေထိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ထူးခြားဆန်းကြယ်သော ဖြစ်ရပ်မှန်များ သမိုင်းပျောက်နေသော/လူသိနည်းသော နေရာရာတော်တော်များများ ရှိကြပေလိမ့်မည်။ ထိုအထဲတွင် ကျွန်ုပ်တင်ပြလတ္တံ့သော တွင်း ၁၀၀ သည်လည်း အပါအဝင်ပါ။ ၎င်း တွင်း ၁၀၀ ကို ကျန်စစ်သား လှံကစား၍ ကျန်ခဲ့သော နေရာဟု ပါးစပ် ရာဇဝင်ရှိသည်။ တွင်းတွေ ရှိတဲ့ နေရာကတော့ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထို နှင့် ဘီးလင်းကြား ထင်းမှုန်ကုန်းကျေးရွာနားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်လည်း ကျန်ုပ်၏ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို တင်ပြရလျှင် လှံကစားတယ် ဆိုကတည်းက ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် ကစားလို့ ရတယ် မဟုတ်ပါလော။ အခုဟာက ကျောက်ဖြာပေါ်၌ သီးသန့်ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြီးရင် လှံကစားလို့ … Read more
မျက်နှာနှင့် နှုတ်ခမ်း တစ်ဝိုက်မှာ ” မှဲ့” ရှိခဲ့ရင်…
နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်မှာ ”မှဲ့” ပါတဲ့သူ အများစုဟာ သနားစရာ၊ ချစ်စရာ အလွန် ကောင်းကြပါတယ် ။ သူတို့တွေဟာ အပြင်ပန်းမှာ ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းတယ် ထင်ရပေမယ့် အတွင်းစိတ် သဘောထားကတော့ အလွန် နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပါတယ် ။ ပွစိပွစိလုပ်တာကတော့ ဝါသနာပါ :- သူများကို ကူညီလိုက်လို့ ကိုယ့်မှာ သုညဖြစ်သွား ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့သူ အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင် ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်နေတတ်တဲ့ သူတွေပါ ။ နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက် ”မှဲ့” ပါတဲ့သူတွေဟာ စေတနာလည်း အရမ်းကောင်းသလို သံယောဇဉ်လည်း အလွန်ကြီးကြတဲ့ သူတွေ ပါ ။ သူတို့ဟာ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လည်း လွယ်ပါတယ်။ ခဏခဏလည်း စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် တတ်ပါတယ် ။ စိတ်ကောက်လည်း ခဏပဲ။ ချော့မယ့်သူရှိရင်တော့ ဟန်အမူပိုပြီး … Read more
ခင်ဦး ရွာသစ်ကုန်းရွာကို စစ်တပ်က ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံမီးရှို့နေ ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေးနေရ
ခင်ဦး ရွာသစ်ကုန်းရွာကို စစ်တပ်က ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံမီးရှို့နေ ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေးနေရ ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၇ စစ်ကိုင်းတိုင်း ခင်ဦးမြို့နယ် ရွာသစ်ကုန်းရွာကို အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့များနှင့် ပျူစောထီး ၇ဝခန့်က ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ ၇ရက်နေ့ ညနေ ၅နာရီခန့်တွင် ကျေးရွာအတွင်း ရောက်ရှိလာပြီး ပြည်သူပိုင် နေအိမ်များကို ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်မံမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပြီး ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေးနေရကြောင်း ခင်ဦးမြို့နယ် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရန်ကုန် ခေတ်သစ် မီဒီယာသို့ပြောဆိုသည်။ ” အခုညနေ ၅နာရီလောက် စစ်ခွေးနဲ့ ပျူ ၇ဝလောက် ရွာကို ရောက်လာတယ်။ ပြည်သူပိုင် နေအိမ် တွေကို မီးရှို့နေတယ်။ အိမ် ၂လုံးလောင်သွားပြီလို့သိရတယ်။ ရွာမှာ လူမရှိတော့ မီးလောင်မှု … Read more
၁၇ နှစ်မှ ၃၀ အတွင်း အပျို/လူပျိုများသာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်ရတဲ့ အနမ်းဖလှယ်ပွဲတော်….
Omed – omedan ဆိုသည်မှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ဘာလီလူမျိုးတို့ စကားအရ “ဆွဲ – ဆွဲ”လို့ အဓိပ္ပါယ်ရသလို “ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ အနမ်းပေးကြတဲ့” ပွဲတော် (အနမ်းပွဲတော်) ဟုလည်း အခုအချိန်မှာ လူသိများနေတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ပွဲတော်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Omed – omedan လို့ ဘာလီစကားအရ ခေါ်ကြတဲ့ ဒီရိုးရာ ဓလေ့ပွဲတော်ကို ဘာလီရှိ “Banjar Kaja နဲ့ Sesetan Denpasar” ဆိုသည့် ကျေးရွာလေးတွေမှာ ကျင်းပလာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် ရှိနေခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲခဲ့ကြသူတွေက အဆိုပါ ကျေးရွာလေးမှ ဒေသခံလူငယ်လေးတွေကပဲ အရင်က ကျင်းပြုလုပ်ကာ ဆင်နွဲခဲ့ကြပြီး ဒီပွဲတော်ဟာ လူငယ်တွေအတွက် အဓိကကျင်းပကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အသက် ၇၀ အဖိုးနဲ့ ၁၅ နှစ် သမီးမင်္ဂလာဆောင်
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အသက် ၇၀ အဖိုးနဲ့ ၁၅ နှစ် သမီးမင်္ဂလာဆောင် လူပျို ကြီး အပျိုကြီးဒေါသ ထွက်လေးမလားတော့သိဘူး မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကိုဗစ်နဲ့ကိုစစ်တို့ကြောင့် စိတ်ဓာတ်တွေကျနေပါပြီ။ အသက်ကြီးနေပြီဆိုပြီးစိတ်ဓာတ်မကျတဲ့ လာအိုနိုင်ငံကအဖိုး။ အသက် ၇၀ အဖိုးနဲ့ ၁၅ နှစ် သမီးမင်္ဂလာဆောင်။ လာအိုနိုင်ငံ ဆာဗာနာခတ်ပြည်နယ်ချမ်ဖုန်းခရိုင် ဟူရာဖိုင်းကျေးရွာတွင်ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့က ဖြစ်ပါသည်။ အသက်က အတားအဆီးမဟုတ်ချစ်ခြင်းက အဓိကဟု ဆိုပါသည်။ credit unicode အံ့သွစရာကောငျးတဲ့ အသကျ ၇၀ အဖိုးနဲ့ ၁၅ နှဈ သမီးမင်ျဂလာဆောငျ လူပြို ကွီး အပြိုကွီးဒေါသ ထှကျလေးမလားတော့သိဘူး မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ ကိုဗဈနဲ့ကိုစဈတို့ကွောငျ့ စိတျဓာတျတှကေနြပေါပွီ။ အသကျကွီးနပွေီဆိုပွီးစိတျဓာတျမကတြဲ့ လာအိုနိုငျငံကအဖိုး။ အသကျ ၇၀ အဖိုးနဲ့ ၁၅ နှဈ … Read more
ရေလာခပ်သည့် ခလရ ၆၀၄ မှ စစ်သား ၃ ဦး မိုင်းဆွဲခံရပြီး သေဆုံး(ရုပ်သံ)
ရေလာခပ်သည့် ခလရ ၆၀၄ မှ စစ်သား ၃ ဦး မိုင်းဆွဲခံရပြီး သေဆုံး(ရုပ်သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၇ ကရင်ပြည်နယ်၊သံတောင်ကြီးမြို့နယ် KNU တပ်မဟာ ၂ နယ်မြေတွင် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ ရေလာခပ်သည့် ခလရ ၆၀၄ မှ စစ်သား ၃ ဦး မိုင်းဆွဲခံရပြီး သေဆုံးသွားကြောင်း Taw Oo Karen Newsက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ကရင်ပြည်နယ်၊သံတောင်ကြီးမြို့နယ်လိပ်သိုလ်မြို့ခွဲ နှင့် လွိုင်ကော်လမ်းရှိ လေလော်ဒေး‌ ကျေးရွာအနီး စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတခုဖြစ်တဲ့ ကျောက်လုံးကြီးစခန်း ( ခလရ -၆၀၄)တပ်သား (၃)ဦးကို ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့ နံနက် ၉နာရီ ၅မိနစ်ခန့်အချိန်တွင် ရေဆင်းခပ်နေစဉ် … Read more
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပ်….မန္တလေးမှာ ပစ္စည်းလု ၄နှစ်သမီးကိုပါ…seemore
မန္တလေးမှာရွှေနားကပ်လုယူပြီး၎နှစ်သမီးကိုသတ်ဖြတ်မှု့ဖြစ်ပွား ဇန္နဝါရီ ၆ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း ၅ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အသက်လေးနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးကိုချောင်းအနီးဂုံနီအိတ်တလုံးထဲမှာသတ်ဖြတ်ပြီးစွန့်ပစ်သွားမှု့တခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်။ အဆိုပါမိန်းကလေးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိစဉ်မှာမိန်းကလေးဝတ်ဆင်ထားတဲ့ရွှေနားကပ်တရံပျောက်ဆုံးနေပြီးလက်နောက်ပြန်အနေအထားနဲ့သေဆုံးနေတာကိုဒေသခံတွေကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သေဆုံးသူမိန်းကလေးငယ်ဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်အုံးချောရွာအမှတ်၇ရပ်ကွက်ထဲကဖြစ်ပြီယမန်နေ့ညကတည်းကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်တရွာလုံးနီးပါးလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပေမယ့် ရှာမတွေ့ခဲ့ဘဲ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှသာရွာအနီးကချောင်းအတွင်းမှာသေဆုံးလျက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း ၅ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အသက်လေးနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးကိုချောင်းအနီးဂုံနီအိတ်တလုံးထဲမှာသတ်ဖြတ်ပြီးစွန့်ပစ်သွားမှု့တခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်။ အဆိုပါမိန်းကလေးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိစဉ်မှာမိန်းကလေးဝတ်ဆင်ထားတဲ့ရွှေနားကပ်တရံပျောက်ဆုံးနေပြီးလက်နောက်ပြန်အနေအထားနဲ့သေဆုံးနေတာကိုဒေသခံတွေကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သေဆုံးသူမိန်းကလေးငယ်ဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်အုံးချောရွာအမှတ်၇ရပ်ကွက်ထဲကဖြစ်ပြီယမန်နေ့ညကတည်းကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်တရွာလုံးနီးပါးလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပေမယ့် ရှာမတွေ့ခဲ့ဘဲ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှသာရွာအနီးကချောင်းအတွင်းမှာသေဆုံးလျက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း ၅ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အသက်လေးနှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးကိုချောင်းအနီးဂုံနီအိတ်တလုံးထဲမှာသတ်ဖြတ်ပြီးစွန့်ပစ်သွားမှု့တခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်။ အဆိုပါမိန်းကလေးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိစဉ်မှာမိန်းကလေးဝတ်ဆင်ထားတဲ့ရွှေနားကပ်တရံပျောက်ဆုံးနေပြီးလက်နောက်ပြန်အနေအထားနဲ့သေဆုံးနေတာကိုဒေသခံတွေကတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သေဆုံးသူမိန်းကလေးငယ်ဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်အုံးချောရွာအမှတ်၇ရပ်ကွက်ထဲကဖြစ်ပြီးယမန်နေ့ညကတည်းကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်တရွာလုံးနီးပါးလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပေမယ့် ရှာမတွေ့ခဲ့ဘဲ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှသာရွာအနီးကချောင်းအတွင်းမှာသေဆုံးလျက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ #MyanmarLabourNews unicode မန်တလေးမှာရှနေားကပျလုယူပွီး၎နှဈသမီးကိုသတျဖွတျမှု့ဖွဈပှား ဇန်နဝါရီ ၆ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးမှာ ဒီကနမေ့နကျပိုငျး ၅ နာရီဝနျးကငျြလောကျမှာပြောကျဆုံးသှားတဲ့အသကျလေးနှဈအရှယျမိနျးကလေးတဦးကိုခြောငျးအနီးဂုံနီအိတျတလုံးထဲမှာသတျဖွတျပွီးစှနျ့ပဈသှားမှု့တခုဖွဈပှားခဲ့တယျလို့ဒသေခံတှရေဲ့ထုတျဖျောပွောဆိုခကျြတှအေရသိရပါတယျ။ အဆိုပါမိနျးကလေးရဲ့ရုပျအလောငျးကိုတှရှေိ့စဉျမှာမိနျးကလေးဝတျဆငျထားတဲ့ရှနေားကပျတရံပြောကျဆုံးနပွေီးလကျနောကျပွနျအနအေထားနဲ့သဆေုံးနတောကိုဒသေခံတှကေတှရှေိ့ခဲ့တာဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။ သဆေုံးသူမိနျးကလေးငယျဟာမန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးပုသိမျကွီးမွို့နယျအုံးခြောရှာအမှတျရရပျကှကျထဲကဖွဈပွီယမနျနညေ့ကတညျးကပြောကျဆုံးသှားတဲ့အတှကျတရှာလုံးနီးပါးလိုကျလံရှာဖှခေဲ့ပမေယျ့ ရှာမတှခေဲ့ဘဲ ဒီကနမေ့နကျပိုငျးမှသာရှာအနီးကခြောငျးအတှငျးမှာသဆေုံးလကျြရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တာဖွဈတယျလို့ဒသေခံတှကေဆိုပါတယျ။ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးမှာ ဒီကနမေ့နကျပိုငျး ၅ နာရီဝနျးကငျြလောကျမှာပြောကျဆုံးသှားတဲ့အသကျလေးနှဈအရှယျမိနျးကလေးတဦးကိုခြောငျးအနီးဂုံနီအိတျတလုံးထဲမှာသတျဖွတျပွီးစှနျ့ပဈသှားမှု့တခုဖွဈပှားခဲ့တယျလို့ဒသေခံတှရေဲ့ထုတျဖျောပွောဆိုခကျြတှအေရသိရပါတယျ။ အဆိုပါမိနျးကလေးရဲ့ရုပျအလောငျးကိုတှရှေိ့စဉျမှာမိနျးကလေးဝတျဆငျထားတဲ့ရှနေားကပျတရံပြောကျဆုံးနပွေီးလကျနောကျပွနျအနအေထားနဲ့သဆေုံးနတောကိုဒသေခံတှကေတှရှေိ့ခဲ့တာဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။ သဆေုံးသူမိနျးကလေးငယျဟာမန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးပုသိမျကွီးမွို့နယျအုံးခြောရှာအမှတျရရပျကှကျထဲကဖွဈပွီယမနျနညေ့ကတညျးကပြောကျဆုံးသှားတဲ့အတှကျတရှာလုံးနီးပါးလိုကျလံရှာဖှခေဲ့ပမေယျ့ ရှာမတှခေဲ့ဘဲ ဒီကနမေ့နကျပိုငျးမှသာရှာအနီးကခြောငျးအတှငျးမှာသဆေုံးလကျြရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့တာဖွဈတယျလို့ဒသေခံတှကေဆိုပါတယျ။ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးအတှငျးမှာ ဒီကနမေ့နကျပိုငျး ၅ နာရီဝနျးကငျြလောကျမှာပြောကျဆုံးသှားတဲ့အသကျလေးနှဈအရှယျမိနျးကလေးတဦးကိုခြောငျးအနီးဂုံနီအိတျတလုံးထဲမှာသတျဖွတျပွီးစှနျ့ပဈသှားမှု့တခုဖွဈပှားခဲ့တယျလို့ဒသေခံတှရေဲ့ထုတျဖျောပွောဆိုခကျြတှအေရသိရပါတယျ။ အဆိုပါမိနျးကလေးရဲ့ရုပျအလောငျးကိုတှရှေိ့စဉျမှာမိနျးကလေးဝတျဆငျထားတဲ့ရှနေားကပျတရံပြောကျဆုံးနပွေီးလကျနောကျပွနျအနအေထားနဲ့သဆေုံးနတောကိုဒသေခံတှကေတှရှေိ့ခဲ့တာဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။ သဆေုံးသူမိနျးကလေးငယျဟာမန်တလေးတိုငျးဒသေကွီးပုသိမျကွီးမွို့နယျအုံးခြောရှာအမှတျရရပျကှကျထဲကဖွဈပွီးယမနျနညေ့ကတညျးကပြောကျဆုံးသှားတဲ့အတှကျတရှာလုံးနီးပါးလိုကျလံရှာဖှခေဲ့ပမေယျ့ ရှာမတှခေဲ့ဘဲ … Read more
အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်း ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်နည်း
အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်း ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်မယ် မြန်မာ့ရိုးရာ မဟာဘုတ် ဗေဒင်ပညာမှအိမ်ထောင်ရေး အဟောများ အကုန်မမှန်ပါ လူ ၁၀၀ မှာ ၈၀% ဖြစ်ကြရတတ်တယ်လို့ ဆိုလိုရင်းသာဖြစ်ပါတယ်… တွက်နည်း” မိမိ၏ မြန်မာမွေးခုနှစ်ကို ၇ ဖြင့် စား၍ အကြွင်း ၁ ရသော ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ပါက အကြွင်း ၁(ကျား)ဆိုသော အဟော မိန်းကလေးဆိုပါက အကြွင်း ၁ (မ) ဆိုတဲ့ အဟောကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အကြွင်း ၁ (ကျား) အကြွင်း ၁ ရရှိသော ယောင်္ကျားလေးများသည်။ များသာအားဖြင့် အိမ်ထောင်တစ်ဆက်ထဲ ကျတတ်ကြပါတယ်။ မိမိဘက်က အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ်ကို သည်းခံ၍ ပေါင်းသင်းပေမယ့် အိမ်ထောက်ဘက်က မိမိအပေါ်ကို ကြပ်ကြပ်မကောင်းလျှင်တော့ နောက်အိမ်ထောင် ၂ ဆက် ၃ … Read more
Channel Lover provide celebrity, life style,breaking news, local news and International news.Articles are displayed in tex,video and photos.Vistors can read news in articles type of categories in https://achawlaymyar.com/ (example - News, Entertainment,Sport, Health, Celebrity, Media &Music ...etc). Hope our vistors enjoy our website.
ယနေ့နံနက်(၈)နာရီတွင် ကြက်သီးထစရာ မီးလောင်မှုကြီး(ရုပ်သံ)
လိုင်းပေါ်ကချစ်သူကို ယုံစားမိလို့ ဘ၀ပျက်ခဲ့ရတဲ့ အသက်(၂၀)အရွယ် ကောင်မလေး
“၇ ရက်သားသမီးမ်ားအတြက် တစ္ပတ္စာဗေဒင်ဟောစာတမ်း” (၁၃.၃.၂၀၂၂) မွ (၁၉.၃.၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ
အမေရိကန်ကို အီရန်က ဒုံးကျည်ဖြင့် ဆော်ပြီ(ရုပ်သံ)
မတ်လ(၂၂)ရက်မှ (၂၅)ရက်အတွင်း မိုးရွာသွန်းမယ့် ဒေသများ
erotik on ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ သမ်မတ ဦးဝငျးမွငျ့တို့ ဒက်ခိဏခရိုငျတရား ရုံး၌ တရားစှဲခံရ
March 2022 (161)
February 2022 (311)
December 2021 (403)
July 2021 (254)
© 2022 Channel Lover • Built with GeneratePress